Waaxda Tacliinta Sare | Wasaaradda Hiddaha & Tacliinta Sare
Tacliinta Sare ee Soomaaliya waxay sameysay horumar muuqda 10kii sano ee ugu dambeeyay, waxayna ka kooban tahay dhinacyo kala duwan sida waxbaris, cilmi-baarisyo. Waxaa wax ka barta kumannaan ardey Soomaaliyeed oo kala jooga gobollada kala duwan ee dalka, haba ku kala badnaadaane.
Waaxda Tacliinta Sare waxay mas’uul ka tahay rukhsad-bixinta goobaha waxbarashada sare, hubinta tayada waxbarasho oo joogto iyo horumarinta xarumaha waxbarashada sare. Wasaaraddu waxay sameyn doontaa dadaal kasta oo ay ku caawin karto jaamacadaha iyo machadyada Soomaaliyeed inay gaaraan heer caalami ah, iyadoo si joogto ah loo horumarin doono, loona hubin doono tayada waxbarashadooda.
Waaxda Tacliinta Sare waxay kaloo maamushaa deeqaha waxbarashada ee Soomaaliya ay ugu deeqaan dalalka aan saaxiibda nahay, waxaana arrintaasi aan la kaashanaa guddiga madaxa banaan oo ay madax ka yihiin bulshada rayidka ah.
Waaxdu waxay ka shaqeysaa in la taageero ujeeddooyinka tacliinta sare oo ay aasaasi u yihiin in la helo waxbarasho iyo tababarro tayo leh; in la sameeyo cilmi-baarisyo tayo leh; iyo in la fidiyo adeegyo heer sare ah. Wasaaraddu waxay Tacliinta Sare kala shaqeyneysaa dhinacyadan:
In dib-u-qaabeyn lagu sameeyo gebi ahaanba tacliinta sare ee Soomaaliya si sare loogu qaado tayada, xiriirka waxbarashadu la leedahay nolosha dadka iyo dalka, iyo furfurnaanta dhinaca maamulka.
In la sharciyeeyo, lana kormeero waxbarashada sare nooc kasta oo ay tahay.
In sare loo qaado helitaanka waxbarashada sare iyadoo la kaalmeynayo jaamacadaha jira, lana abuurayo kuwo cusub oo ay ka mid yihiin waxbarashada farsamada ee dugsiga sare kaddib.
In la abuuro jawi lagu abuuro aqoon iyadoo la sameynayo cilmi-baaris iyo hal-abuur.